I-AndroBox - Ukuzijabulisa kwasekhaya okuhlakaniphile
Posted on 06 / 04 / 2020 08 / 04 / 2020 by I-Androbox
Thola okwakho okushibhile lapha:
Posted in Ibhokisi le-Android, Izibuyekezo, Ividiyo2 Amazwana
I-NVIDIA SHIELD TV | Ukusakaza Media Player nge-Remote & Game isilawuli
Posted on 10 / 11 / 2017 10 / 11 / 2017 by I-Androbox
Thola kusuka e-Amazon I-TV ye-NVIDIA SHIELD
I-Google Life exhunyiwe - Finyelela konke okuqukethwe kwakho kwe-Google nezici zasekhaya ezihlakaniphile noMsizi weGoogle, wabelana ngezithombe zakho ze-Google ku-4K, bese usakaza izinhlelo zakho zokusebenza ozithandayo ku-TV yakho nge-Chromecast 4K.
I-4K HDR Powerhouse - Buka i-Netflix ne-Amazon Video ku-4K HDR ekhanyayo, ne-YouTube, i-Google Play Ama-Movie ne-TV, ne-VUDU ku-4K. Izinhlelo zokusebenza ezifana ne-HBO Now, Spotify, ne-ESPN zihlangabezana nazo zonke izidingo zakho zokuzijabulisa.
Imidlalo ye-NVIDIA-Powered - Imidlalo ye-Cast kusuka kwi-PC yakho ye-GeForce-powered to TV yakho ku-4K HDR ku-60 FPS. Thola amageyimu wefu we-NVIDIA anikwa amandla yi-GeForce MANJE. Futhi ujabulele imidlalo ekhethekile ye-Android ku-SHIELD kuphela.
I-Smart Home Ready - Umsizi weGoogle uvumela ukuthi ulawule ukuzijabulisa kwakho nekhaya lakho elinobuhlakani ngezwi lakho. Ngeza isixhumanisi se-SmartThings ukuxhuma amalambu ngaphandle kwezingcingo, izipikha, ama-thermostats, nokuningi.
Posted in Ibhokisi le-Android, Izibuyekezo, IvidiyoUmake amadimanda, ibhokisi le-android, nvidia, Nvidia Isihlangu TV3 Amazwana
I-Xiaomi MI BOX
Posted on 22 / 09 / 2017 10 / 11 / 2017 by I-Androbox
GearBest Ibhokisi le-Xiaomi Mi TV
Posted in Ibhokisi le-Android, Izibuyekezo, IvidiyoUmake amadimanda, ibhokisi le-android, Xiaomi MiShiya amazwana
I-Mocute 054 ye-bluepad ye-gamepad ye-wireless Handle Controller
Posted on 22 / 09 / 2017 27 / 08 / 2020 by I-Androbox
Thola okwakho okushibhile kusuka lapha UMocute 054
Posted in izesekeli, Izibuyekezo, IvidiyoUmake Bluetooth, isilawuli, Ukuphathwa Kwegeyimu, Okungenantambo, Xiaomi Mi, I-Xiaomi Mi Wireless Bluetooth Game Handle ControllerShiya amazwana
Ukubuyekezwa Okugcwele kwe-Yoka TV KB2 Pro
Posted on 05 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by I-Androbox
Thola ibhokisi lakho lishibhile lapha
Amazon I-Yoka TV
Posted in Ibhokisi le-Android, Izibuyekezo, Ividiyo3 Amazwana
Ukubuyekezwa Okugcwele kwe-H96 Pro Plus
Posted on 03 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by I-Androbox
Thola ibhokisi lakho lishibhile lapha H96 Pro +
Posted in Ibhokisi le-Android, Izibuyekezo, IvidiyoShiya amazwana
I-Air Mouse 3 ku-1
Posted on 02 / 03 / 2017 23 / 12 / 2017 by I-Androbox
Thola i-Air Mouse yakho eshibhile kusuka lapha I-AirMouse
Posted in izesekeli, Izibuyekezo, Ividiyo1 Comment
I-Smarter Home Entertainment Revolution
Posted on 18 / 02 / 2017 24 / 02 / 2017 by I-AndroBox
Lenzani i-Android Box?
Njengoba igama lalo liphakamisa, i-Android Box isuselwa kusoftware efanayo ye-Android etholakala kumaselula, kepha yenzelwe ukusebenza kumadivayisi okusakaza we-TV.
I-Android Box yenza noma iyiphi i-TV ibe Hlakaniphile kune-smart, kufana nokuhlanganisa ifoni noma ithebhulethi engcono kakhulu kuma-steroids nge-screen enkulu ye-TV noma i-Projector screen nanoma yiluphi uhlobo lwesilawuli kude njengegundane, ikhibhodi, igundane lomoya le-Gyro, isilawuli segeyimu, irimothi ejwayelekile ye-TV njll ukuthola umuzwa omuhle kakhulu wokuzijabulisa womsebenzisi wesikhathi esizayo. Awudingi ama-PC abizayo noma ama-Game Boxes ukuze ukwazi ukuthola ukuzijabulisa okuhle kakhulu. Inzuzo enkulu ye-Android Box inketho yokufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza lwe-Google play ne-Kodi.
Nge-Kodi unethuba lokubuka cishe yonke into mahhala futhi ngaphandle kokubhalisile njengezinhlelo ze-TV, ama-Movie, iziteshi ze-Live TV, ama-Torrents, ama-Youtube njll.
Ngesitolo seGoogle Play ungafaka noma imuphi umdlalo we-Android bese uwudlala ku-TV yakho usebenzisa noma yisiphi isilawuli segeyimu, ikhibhodi noma igundane. Noma ungasebenzisa inketho ye-Miracast ukubuka isikrini sakho bese udlala noma yimuphi umdlalo kusuka ku-smartphone yakho esikrinini esikhulu usebenzisa i-smartphone yakho njengomlawuli.
Ungafaka izinhlelo zokusebenza ze-IP Tv ukubuka i-TV bukhoma, noma usebenzise iNetflix
Kanye nemibukiso ye-TV nama-movie, i-Android TV ikuvumela ukuba udlale imidlalo, efana ne-PlayStation TV ne-Amazon Fire TV yenza. I-Android TV izoncika ku-Google Play Isitolo ukuletha okuqukethwe, kepha ukusesha kuzophinde kuhlangane ngezinsizakalo zokusakaza okuvela eceleni ezifana neNetflix uma kufanele.
Uma uneNetflix, iBlinkbox noma i-Prime Instant Video efakwe ku-Android TV futhi uyicela ukuthi ibheke amafilimu anenkanyezi ye-Cate Blanchett, i-Android TV kufanele ibheke bonke labo ukubona ukuthi yini etholakalayo.
Ngokwemvelo, uzokwazi nokubuka i-TV ejwayelekile, uma lokho kusintanta isikebhe sakho.
NjengeChromecast, i-Android TV nayo iyaphindeka kabili njenge-flower enesici sayo se-Cast. Ngakho-ke abasebenzisi bangathola okuqukethwe kumaselula abo noma kwisiphequluli se-Chrome bese bekufaka ku-TV yabo ye-Android, akukho okukhathazayo.
Posted in Ibhokisi le-Android3 Amazwana
I-Airmouse 4 koku-1 okukude kwe-T6 $21.11
I-Himedia Q10 Pro $286.23 $145.93
I-Xiaomi MI BOX S $99.99 $53.75
I-TV ye-NVIDIA SHIELD $199.99
I-Xiaomi MI BOX $101.43